Mowduuca ee halkan qodobkan ku saabsan tahay sida loogu biiro files MTS / M2TS. Sida aan ognahay, MTS iyo M2TS waxaa inta badan loo isticmaalaa in HD fiidiyo videos. Marka aad qabsadaan videos qaar ka mid ah adiga oo isticmaaleya isticmaale fiidiyo, waxaa laga yaabaa in dhowr clips video oo kala duwan halkii dhamaystiran video ah. At this time, biirtay MTS / M2TS wada galeen hal weyn u badan tahay in ay timaado in aad maskaxdaada.
Si taas loo sameeyo shaqadan, a joiner xirfad MTS / M2TS waa lagama maarmaan. Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor) ( Filmroa u Mac (Originally Wondershare Video Editor for Mac) ) waxaa si xoog leh halkan lagu taliyey. Waxay kaa caawin karaan inaad ku milmaan kala duwan video clips mid kaliya fudud jiitaa-iyo-dhibic. Waxaa intaa dheer, waxa ay leedahay hawlaha tafatir dheeraad ah oo qabow inay ku sii daayaan retouch aad video, sida jaray qaar ka mid ah video clips rabin, galinta qaar ka mid ah kala guurka quruxda leh, qoraal, saamaynta iyo sawir-in-sawir iyo wixii la mid ah.
Marka aad iyaga muuqan isu geeyo, app wuxuu kuu ogolaanayaa inaad badbaadin file weyn ee qaab kasta oo aad rabto, oo ay ku jiraan DVD disc ah, ama si toos ah u wadaagaan by uploading in YouTube ama aaladaha la qaadi karo aad. Taasi waa sida.
Qayb First, sida loogu biiro mts / m2ts fayl la Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor)
Qaybta labaad, shanta joiners MTS ugu wanaagsan
1 dar files
Ka dib kuu soo ordi this MTS / M2TS midoobeen, guji "Import" doorasho si shuban dhammaan faylasha MTS / M2TS maxalliga ah si ay isu tagaan. Ka dib markii in, ay la soo daabici doonaa on album User ee app this. Ama waxaad si toos ah kuwaa oo laga yaabaa in ay User ee Album ka your computer.
2 iyaga biir togeter
Hadda, waxaad u baahan tahay in ay u dhaxaysaa oo dhan laga keeno files MTS / M2TS in Timeline ee hoose ee MTS / M2TS file midoobeen. Iyo amarka ka dhigan tahay si Play. Si aad u samayn, oo kaliya kuwaa oo midba mid ka album in ay Timeline ah. Haddii aad rabto in aad beddesho amarka laba clips, kaliya labada is dhaafsadaan by fudud jiitaa-iyo-dhibic. Laakiin ma jiidi mid video file in kale, waayo, waxaa iska kala tagno doonaa video hore. Haddii aad mar hore ku dhameysatay kaalinta shaqada, waxaad ku eegaan karo saamaynta in waqtiga dhabta ah ee suuqa kala Kulanka Xiisaha Leh ee dhinaca midigta ee interface ka.
3 Ma qaar ka mid ah tafatirka fudud
Ka hor inta dhoofinta file weyn, haddii baahida loo qabo, waxa kale oo aad samayn kartaa qaar ka mid ah shaqooyinka tafatirka fudud. Tusaale ahaan, labo gool guji video clip ee Jadwalka ka si ay ula qabsadaan saamayn video sida Contract, Saturation, dhalaalka, bedesho mugga audio ee video clip kasta, ku dar qoraalka, guurka, PIP, asalka music iyo wixii la mid ah. Fadlan u tag tafatirka talooyin MTS si ay u bartaan faahfaahin dheeraad ah.
4 dhoofinta file cusub oo weyn
Markii wax walba la sameeyo ee aad ku qanacsanayn saameynta, waxaad bilaabi kartaa inay u dhoofiyaan file cusub. In geeska midig ugu hooseysa tani MTS / M2TS midowgii, kaliya riix "Abuur" button, ka dibna liiska qaabka wax soo saarka, xulo doonayay habka dhoofinta afarta tabs, "Device", "Qaabka", "YouTube" iyo "DVD".
Qaybta labaad, hogaanka afarta ugu fiican joiners MTS
Heli dhufto ee Windows iyo Mac Mate Final waa xirmo in loogu talagalay in lagu sort kaa caawin, edit iyo diinta aad files MTS. Maadaama aan diiradda saaraya awood u leeyahay inuu ku biiro files MTS halkan waxaan ku arki doonaa si dhow ula at in, oo halkan software ogol yahay ku biirida files aan recoding, taas oo aad u deg deg ah, iyo interface ah xunna habaysan iyo hubinta hanaanka aalada waa ay fududahay in dhammayn. Muuqaaladan daray sameeyo xirmo software this qiimo fiican, oo runtii si ka badan ama ka yar wax kasta oo aad adiga iyo files MTS doonayaan karaa lahaa, waxa ay leedahay waafaqsan weyn oo si sahlan loo isticmaali gacanta ku.
Xirmo kale software Xoolo ka mid ah muuqaalada ag awood u leeyahay inuu ku biiro files, Video Converter, sida magacaba ka muuqata, sidoo kale loogu badalo karo files galay qaabab badan oo kala duwan, iyo sidoo kale ay ka mid yihiin qaababka kale ee tafatirka ka sokow ku biiro. Waxay leedahay taageero fiican u files MTS oo iyaga ku biiri kartaa oo aan recoding jidaynayey habka dhakhso ah guud ahaan, iyo interface ee waa mid fudud, uncluttered iyo fududahay in la isticmaalo.
Xirmo kale, ay magaca keligiis soo jeedinaya waxa ay leedahay talanti oo kale qarsoon in kaliya ku biiro files MTS gudahood, iyo gees uga leexan xagga diinta ah file cad kasoo muuqday waxaa ka mid ah goobaha tafatirka, oo ay ku jiraan qaybsama iyo koontaroolada farqiga kala duwan. Marka laga soo biiray, barnaamijkan laga yaabaa inay tahay ugu dhaqsiyaha badan ee howlgalka halkan, wuxuuna ka shaqeeyaa aad u fiican iyada oo loo marayo interface a smart oo si fiican loo qorsheeyay oo natively taageertaa tirada weyn ee qalabka wax lagu qoro. Aalada A fudud iyo hage dhamaystiran u dhammaystirto sawirka.
Xirmo Tani kaliya biiray files video, waxa ay ku iman mayso qaababka badan oo dheeraad ah, gees uga leexan taageeridda in badan oo qaabab file video ka badan MTS, oo u ogolaanaya soo biiray laba nooc oo kala duwan oo file halka iyaga diinta qaab wax soo saarka gaar ah. Tani waxay diirada saarayaan dhinaca mid khasab ma aha wax xun, interface waa mid aad u fudud oo aan baahida loo qabo gacanta ku dheeraad ah oo siyaada ah iyo barnaamijka aad u fiican u shaqaynayaan, u soo biiray laba MTS wada jir ah ula isbedel lahayn qaab waxay si dhakhso ah u shaqeeyo gudbiyo.
Haddii joiners MTS kor ku xusan ma aha adiga kugu haboon, waxaad qaadan kartaa Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor) tixgeliyaan, taas oo si sahlan loo isticmaalo iyo qalabka tafatirka awood badan. Download version maxkamad free hoos ku qoran.
Sidee inay la midowdo MTS Files
Sida loo Beddelaan wmv in VOB in Windows ama Mac OS X Libaaxa
> Resource > Beddelaan > Sida loo soo biir MTS / M2TS Files